‘यात्रुको चाप हेरेर गाडी थप्छौं, सबै यात्रुले टिकट लिएरै घर जान पाउनुहुन्छ’ - Himal Live- Leading News Portal from Nepal
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १५:१३
दशैं मनाउन नेपालीहरु विदेशबाट स्वदेश फर्किँदैछन् । विदेशबाट काठमाडौं ओर्लिने र काठमाडौं उपत्यकाबाट आआफ्नो गाउँघरसम्म पुग्न अधिकांश नेपालीले सडक मार्ग प्रयोग गर्छन् । काठमाडौं–मुग्लिन, काठमाडौं–बनेपा–बर्दिबास, बल्खु–हेटौंडा, नौबीसे–कुलेखानी जस्तो सडकमार्ग हुँदै यात्रु घरतर्फ लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । दशैंको यात्रुको चाप अझ बढ्न बाँकी नै रहँदा काठमाडौं मुग्लिन सडकको कलंकी–नागढुंगा–नौविसे–धार्के खण्डमा ५ देखि १० घण्टासम्म सवारी जाम हुन थालिसकेको छ । यातायात व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले दशैंको मुखमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको छ । बढेकै भाडामा यात्रा गर्छु भन्दा पनि यात्रुले सुविधाजनक तरिकाले यात्रा गर्न सक्ने वातारण बन्न सकेको छैन । यीनै विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासँग नेपाल डेलीले गरेको समसामयिक अन्तर्वार्ता :
दशैंका यात्रुका लागि अग्रीम टिकट बुकिङ यातयात व्यवसायीहरुले गरेका छन् । र, यात्रुको जाने क्रम सुरु भइसकेको हो ?
दशैंका यात्रुका लागि यातायात व्यवसायी महासंघले असोज ९ गतेदेखि अग्रीम टिकट बुकिङ खोलेको छ । त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा क्रमशः टिकट बुकिङ खुल्दै गए । पोखरालगायत ठाउँको अग्रीम बुकिङ खुल्न बाँकी छ । प्रत्येक वर्षको अनुभवलाई हेर्दा दशैंको १ महिनाअघि देखि दशैंका लागि घर जाने यात्रुहरु राजधानी बाहिर जाने क्रम सुरु हुन्छ । घटस्थापनापछि यात्रुको चाप अझ बढ्छ । त्यसपछि फुलपातिको २ दिनअघिबाट यात्रुको ठूलो चाप रहने गरेको छ । यसरी विजया दशमीको एक महिनाअघिबाट, १५ दिनअघिबाट, सात दिन अघिदेखि र तीन दिनअघि फरक फरक पेशा व्यवसायमा रहेका सर्वसाधारण यात्रुको घर जाने चाप सुरु हुन्छ । यस वर्ष हालसम्म झण्डै ७ लाख यात्रु उपत्यकाबाहिरिसकेका छन् । झण्डै १८ लाख यात्रु अब राजधानी बाहिरिन बाँकी छन् । सामान्यता २ हजार सवारी साधानले काठमाडौंबाट यात्रु लैजाने गरेको छ । तर, दशैंअघि झण्डै ३५ सय सवारी साधानले उपत्यकाबाहिर जाने यात्रुलाई सेवा दिने गर्दछन् ।
कलंकी–मुग्लिन जस्ता मुख्य नाकामा जाम सुरु भइसकेको छ । सुरक्षित र सुविधाजनक तरिकाले दशैंमा घर जान पाउँछन् नेपाली यात्रुले ?
नेपालको यातायात क्षेत्रमा भएको अन्योलताका कारण नयाँ गाडी नआएको अवस्था छ । हामी चुनौतीका बीचमा यो महान राष्ट्रिय पर्व मनाउन लागिरहेका छौं । सडक विभाग, ट्राफिक, सुरक्षा निकाय, उपभोक्ता अधिकारवादी, चालक–परिचालक, टिकट काउन्टरमा बस्ने यातायात व्यवसायी महासंघ, सामुदायिक प्रहरी, क्लब तथा संघसंस्थाका मानिसहरु, यातायात व्यवसायी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आ–आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ । सडक विभागले सडक मर्मत गरेर राम्ररी सवारी चल्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीले कुशलतापूर्वक गाडी व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्दछ । सुरक्षा निकायले सवारीको चेकजाँच छिटोछरितो तरिकाले गर्नुपर्छ । विदेशबाट आएका यात्रुलाई समेत सुरक्षित घर पुर्याउनु पर्ने छ । किटक काट्ने ठाउँमा, राजमार्गहरुमा चोरी डकैती लुटपाट हुन सक्छ । सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिलाउन सक्नुपर्छ । चालक परिचालकले सवारी साधन राम्ररी सञ्चालन गर्नुपर्छ । टिकट काउन्टरमा बस्ने, टिकट काट्ने कर्मचरीले परिचयत्र पत्र लगाएर यात्रुसँग मर्यादित व्यवहार गर्दै लाग्ने भाडा मात्र लिएर टिकट दिने गर्नुपर्छ । नागरिक सहायता कक्षमा बस्नेहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सक्रियतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने यात्रा सुरक्षित हुन्छ ।
तर, सडकको अवस्था हेर्दा यात्रा सुरक्षित हुन सक्ला र भन्ने आशंका रहन्छ नि यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मानिसहरुलाई राजधानीबाट बाहिर निकालेर मात्रै हुँदैन । मानिसलाई ७७ जिल्लाका मुख्य सदरमुकाम तथा बजारहरुबाट गाउँगाउँ तथा घरघरमा पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । यासका लागि राजमार्ग मात्र होइन, ग्रामीण सडकाहरु समेत मर्मत गरेर गाडी गुड्न सक्ने बनाउनु पर्छ । कलंकी–नागढुंगा सडककै उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ ७ वर्षदेखि सडक बिग्रिएको छ । सडक बनाउनु पर्छ भन्ने सडक विभाग वा सरकारलाई थाहा नभएको होइन । अहिले दशैंको मुखमा आएर सवारी रोकेर मर्मत गर्दा समस्या आइरहेको छ । यसतर्फ पनि सरकारले सही समाधान खोज्नु पर्छ । वर्षाले ग्रामीण क्षेत्रका सडक बिग्रिएका छन् । ग्रामीण सडकमा सकेसम्म छिटो गिट्टी बालुबा हालेर सडक पुरिनुपर्छ । सवारी साधान चल्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।
अबको केही दिन नेपालभरीकै सबै सवारी साधानलाई राजधानी केन्द्रीत गर्नेपर्ने देखिन्छ । विगतका वर्षहरुमा यात्रुलिएर जाने र खाली फर्किने गाडीलाई यातायात व्यवसायी समितिले नै तेल हालिदिने व्यवस्था थियो । त्यसो व्यवस्था अहिले रहेन । यातायात क्षेत्र देशको रक्त सञ्चार हो । यसलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मात्र प्रयोग गर्ने र अरु बेला गाली मात्र गर्ने गर्नु हुँदैन ।
अग्रीम टिकट बुकिङ सकियो भन्ने पनि सुनियो । सबै नेपालीले टिकट लिएरै बसमा चढेर दशैं मनाउन घरसम्म पुग्न सक्ने अवस्था बन्छ ?
होइन । यो कुरा सञ्चार माध्यमहरुमा आए पनि हामी पनि फिल्डमा पुगेर हे¥यौं । अवस्था त्यस्तो होइन । पश्चिम नेपालका गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायत क्षेत्रमा यात्रुको चापले गाडी पुगेन भन्ने कुरा आयो । केही दिनअघि मात्र ३० ओटा भन्दा बढी गाडी थपिएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पनि प्रदेश राजधानीको विषयमा चर्किएको आन्दोलनले सवारी सञ्चालनमा समस्या आएको थियो । त्यसरी अब बन्द हड्ताल गर्नु हुँदैन । हड्ताल भएन भने त्यस्तो अवश्था नरहन सक्छ । यात्रुको चाप र परिस्थिति हेरेर गाडी बढाउन हामी सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । यसका लागि सरकार, सञ्चार माध्यम सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । जब भयो राति अनि सरकार तातेको भनेजस्तो भएको छ । कलंकीमा सडक मर्मत थालिएको छ । यसले झन समस्या थपेको छ ।
दशैंको फुलपातीसम्म नकुरी काठमाडौं उपत्यकामा फुसर्दीला भएका व्यक्तिहरु अहिले नै दशैंका लागि घर जाँदा केही सहज हुन्छ । अत्यावश्यक पेशा तथा व्यवसाय भएका र बिदा नभइसकेका व्यक्तिहरुमात्र बसेर फुर्सद भएका व्यक्तिहरु घर जाँदै गर्न हामीले आम यात्रु महानुभावहरुलाई आग्रह पनि गर्दै आएका छौं ।
डलरको मूल्यवृद्धिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढेको छ । भारतमा नेपालमा भन्दा महँगो भएको छ, पेट्रोल र डिजेल । इन्डियन आयल निगमले पठाएको नयाँ मूल्यसूचि अनुसार तेलको मूल्य नबढाए पनि निगमको मासिक घाटा बढाएको छ । यातायातको भाडा समायोजन त १० प्रतिशत भइसकेको छ । यो पर्यात छ कि अझै भाडा बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँहरुको माग छ ?
खास २०६९ सालदेखि गरी १२ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसकेको थियो । ०६९ सालमा २० हजार रुपैयाँ पर्ने एउटा टायरको मूल्य दोब्बर भएर ४० हजार पुगेको छ । लुब्रिकेन्टस्, पार्टस्हरु सबैको मूल्य बढेको छ । बैंकको ब्याज बढेको छ । हामीले वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्डकै आधारमा समायोजन गर्नसरकारलाई भन्यौं । तर, सरकारले मूल्य समायोजन गरिरहेको थिएन । चाडबाडको मुखमा भाडा समायोजन गर्दा बजारमा चौतर्फी ढंगबाट सबै चिजको मूल्य वृद्धि हुन्छ । जनतालाई झनै सास्ती हुन्छ भनेर सरकारले भनेपछि हामी चाडवाड पछि मूल्य समायोजन गर्न सहमत भयौं । ५ असोजदेखि अग्रीम टिकट बुकिङ खोल्ने भनेको थियौं ३१ मा । तर, असोज १ गते सरकारले फेरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । त्यसपछि भने हामीले मूल्य समायोजन नगरी टिकट बुकिङ नगर्ने भनेका हौं । र, १० प्रतिशत समायोजन गरिएको छ । हामीले त एक महिना सरकारको आपूर्ति मन्त्रालयको ४ अर्ब रुपैयाँको कोषबाट अनुदानको व्यवस्था गरेर भाडा नबढाउन समेत भनेको थियौं । सरकारले त्यो गरेन । हाम्रो बाध्यता र सरकारको बाध्यताकै कारण भाडा बढेको हो ।
भाडा बढ्दा त्यसको बहुआयामिक असर अनुसार सबै क्षेत्रमा मूल्य बढ्छ । त्यसैले, भाडा नै नबढाए कुनै क्षेत्रमा पनि मूल्य बढ्दैन भन्ने सरकारको बुझाइ ठीकै होइन र ?
१० प्रतिशत मूल्य समायोजन हुँदैमा सबैतिर स्वभाविक मूल्य बढ्ला । तर, अस्वभाविक रुपमा मूल्य आकाशिँदैन । २ हजार पर्ने एउटा पाइन्टलाई ६ हजारसम्ममा बेचिएको छ । त्यस्ता कैयौं सामाग्री तथा सेवा छन्, जसको मूल्यमा कुनै लगाम नै छैन । त्यस्तो कालोबजारी धेरै ठाउँमा छ । यति बलियो सरकाले अनियन्त्रित बजारको मूल्यलाई अनुगमन गरेर नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्ने हो ।
त्यसो भए यातायात क्षेत्रमा बढी भाडा लिइँदैन ? अन्त्यमा, के भन्नुहुन्छ यात्रु वर्गलार्इ ?
यातायात व्यवसायमा कसैले बढी भाडा लियो भने कारवाही हुन्छ । त्यसैले कसैलाई लाग्ने भाडा भन्दा बढी नतिर्न पनि हामी सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दछौं । नर्मल, डिलक्स, सुपरडिलग्स गाडी अनुसार भाडा दर रहेको छ । आफूले चढ्ने किसिमको गाडीको स्तरअनुसार लाग्ने भाडा तिर्नुहोला । बिचौलियासँग टिकट नलिनुहोला ।